WestJet na-anwale nhọrọ nbanye ntụkwasị obi na-enweghị mmetụ ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » WestJet na-anwale nhọrọ nbanye ntụkwasị obi na-enweghị mmetụ ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ngwọta nnabata ndị ọbịa ọhụrụ na-egosi ohere ọdịnihu maka nhọrọ ịbanye na enweghị mmetụ yana nchekwa maka ndị njem Canada.
Ụnyahụ, WestJet, yana TELUS, nwalere Trusted Boarding, usoro na-enweghị mmetụ nke na-eji teknụzụ nyocha ihu dị nchebe ma dị nchebe iji nyochaa njirimara ndị njem tupu ịbanye ụgbọ elu. Ikpe a bụ nke mbụ n'ụdị ya na Canada wee mee na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke YYC Calgary.
"Ahụmahụ njem ahụ na-agbanwe iji tinye ọtụtụ usoro na-adịghị emetụ aka na WestJet na-emepụta ihe ọhụrụ iji hụ na njem njem ndị ọbịa anyị na-eme ka ọ dịkwuo mma ma na-arụ ọrụ nke ọma, ebe ọ na-ebute nchekwa karịa ihe niile," Stuart McDonald, Onye isi oche onye isi oche na onye isi mgbasa ozi kwuru. "Nnwale nnabata a tụkwasịrị obi bụ njikọ dị n'etiti teknụzụ na WestJet nke ga-eme n'ọdịnihu nyere ndị ọrụ anyị na ndị ọbịa anyị nkwado akwụkwọ na-enweghị kọntaktị."
WestJetNnwale nnabata ntụkwasị obi gosipụtara na iji teknụzụ ụgbọ ala biometric na-enye nkwado akwụkwọ zuru oke ma na-egbochi ndị na-enyeghị ikike ịbanye ụgbọ elu. Ndị ọbịa nnwale rutere WestJet ụgbọ elu 8901 site na nkwenye ihu na obere akpa njirimara dijitalụ ha na Embross 'Canada mere ngwa ngwa biometric na ntinye akwụkwọ na Gate 88. Ọnwụnwa ahụ gosipụtara nzọụkwụ mbụ na mmejuputa teknụzụ dị ka WestJet na-arụ ọrụ na Gọọmenti Canada ịchọ. nkwado zuru oke maka iji ya dị ka ihe nchekwa na nchekwa maka ọdịnihu WestJet ịbanye na ọdụ ụgbọ elu Canada.
“Ka njem ụgbọ elu ji nke nta nke nta maliteghachi, ahụmịhe ndị njem na-aga n'ihu na-etolite. Ntugharị ala anyị, nke e wuru na Canada ngwọta na-enye ndị njem ohere ịnụ ụtọ ahụmịhe nkwenye njirimara na-enweghị mmetụ, ebe ha na-ahụ na ha nwere ike ijikwa njikwa data nkeonwe ha, "Ibrahim Gedeon, Onye isi teknụzụ teknụzụ kwuru. TELUS. "Ọkwa njikwa a na-eguzobe ma na-abawanye ntụkwasị obi nke ndị ahịa site n'ịgbasa ozi nzuzo, nchekwa na ihe egwu data sitere na mmalite, na-enye ndị ahịa nghọta."
Nbanye ntụkwasị obi na-akwado Canada dijitalụ karịa site na iji ihe ọhụrụ Canada. Ọ na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi njirimara onye nwe onwe ya (mmepụta njikọ pụrụ iche, nkeonwe na nke echekwara n'etiti ndị otu abụọ tụkwasịrị obi) site na obere akpa njirimara dijitalụ TELUS nyere na ngwa ama maka IOS na gam akporo. Ọ na-enye nkwado akwụkwọ enweghị kọntaktị, ebe nyocha ihu dabara na akwụkwọ onye njem ebugoro na ngwa tupu ịbanye. N'ụzọ dị mkpa, ngwa ahụ na-eme ka ndị ọrụ na-ejigide ozi nkeonwe ha oge niile, nke pụtara na ha nwere ike kesaa nzere nkeonwe ha ekwenyesiri ike wee kagbuo ịnweta mgbe data adịghịzi mkpa.
Emepụtara ikpo okwu njirimara site na one37 yana Oaro na-enye nkwado iguzosi ike n'ezi ihe akwụkwọ, na-ahụ na azịza ya na-agbaso nchekwa data na ụkpụrụ nzuzo niile kpuchiri n'okpuru Iwu Nchedo Ozi Nkeonwe na Eletrọnịkị (PIPEDA).